Ingxabano ifumana isici sevidiyo yesitayile esilungele ukungena, ukuphuma kwincoko
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Discord ifumana ingxoxo yeVidiyo yeVidiyo elungele ukungena ngaphakathi, incoko yokuyeka
I-Discord ifumana ingxoxo yeVidiyo yeVidiyo elungele ukungena ngaphakathi, incoko yokuyeka
It & apos; s umkhwa omtsha wokusetyenziswa kweeselfowuni kwazo naziphi na iintlobo zokufumana inkxaso yengxoxo yevidiyo mva nje, ebangelwa ngubhubhane we-COVID-19. Namhlanje, sibhale ngokuqaliswa kweFacebook Amagumbi abathunywa inkonzo yokufowuna ngevidiyo, ngelixa iiveki ezimbini ezidlulileyo zisebenzisa i-Telegraph ikwabhengeziwe ukuba iyasebenza ukongeza inkxaso yenkomfa yevidiyo.
Ngoku sijolisa kwingqwalaselo edumileyo yenkonzo yengxoxo yomdlalo. Kwibhlog iposi ukusukela izolo, inkampani engemva kwayo ibhengeze ukuba incoko yayo entsha yeVidiyo yokuncokola ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu okwidesktop, iwebhu, kunye ne-iOS, ngelixa abasebenzisi be-Android kuya kufuneka balinde kancinci.
Inqaku elitsha liza lifakelwe kumajelo ezwi. Emva kokujoyina enye, i-icon entsha ngoku ivumela ukutshintshela kwisandi ukuya kwifowuni yevidiyo. Umda wabathathi-nxaxheba abakhutheleyo kwiminxeba ye-Discord ikonyuswe okwethutyana ukusuka kwi-10 ukuya kwi-25, ngeposti yebhlog iqaphela ukuba olu tshintsho lwenziwe ukulungiselela abantu ababambeke emakhaya.
I-Discord ixhase incoko yevidiyo okwethutyana, kodwa ngenqaku elitsha leVidiyo yeServer, inkampani inethemba lokwanelisa bobabini abantu abaxhonywe ekhaya ngenxa yokuphambuka ekuhlaleni kunye nabasebenzisi ababekade becela inkxaso yokwabelana ngescreen. Kungenxa yokuba iVidiyo yeSeva iyakuvumela ukusasaza ngqo kunye nokwabelana kwescreen.
Umboniso wokusebenzisa zombini ividiyo kunye nokwabelana kwescreen.
I-Discord yaqaliswa ngokusesikweni ngo-2015 kwaye kule minyaka idlulileyo yayiyeyona nkonzo isetyenziswa kakhulu yokuncokola ngabadlali, nangona inani labantu liqhubeka lisanda, ngakumbi njengangoku nje. Abasebenzisi be-iPhone banokufumana i-Discord app kwiApple kunye neeapos zeVenkile yeVenkile Apha Ngelixa abasebenzisi be-smartphone be-Android banokuzikhuphela kuGoogle Play Apha .
Olona suku lusebenzayo lweelaptop
Ungayikhubaza njani iividiyo zokudlala ngokuzenzekelayo kwi-Instagram (iOS kunye ne-Android)
Inqaku le-20 le-Galaxy: yeyiphi eyona ndlela ibalaseleyo yeDolby Atmos? Ungayiseta njani isilinganisi?
Eyona meko icacileyo ye-Samsung Galaxy Note 8
Awunakho ukubiza i-iPhone 7 kwaye umamele umculo, ngaba uza kuhamba ngaphandle kwamacingo?
Ukuthenga okungcono kudibana nesivumelwano sasimahla se-AT & T se-iPhone 7, kwaye siyinyusa yaya kuthi ga kwi-900 yeedola kumakhadi ezipho
Ungayiseta njani ikhusi yevidiyo kwiGPS S10, S10 +, okanye S10e
I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + vs i-Galaxy S8 kunye ne-S8 +